Ungabuzoba njani ubuso bentombazana kunye nepensile? Indlela yokuzoba ubuso obuhle besetyhini? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokuzoba ubuso yentombazana kunye nepensile? Indlela yokuzoba ubuso obuhle besetyhini?
Nobuso bendoda. kuphela amantombazana ...
Ndithathe ifoto ndayikopisha ngokweskimu singasentla. Ungazoba ngepeyinti okanye ipensile, ungasebenzisa amalahle eludongeni okanye encinci kwi-asphalt, kodwa ndiyenzile kwi-Photoshop. Kulula ukuhombisa kakuhle apho, ngendlela engakhange ndiyenze.
Zoba ubuso benkazana Akukho lula konke konke, kunjalo, kuya kufuneka unetalente ukuze yonke into isebenze ngexesha lokuqala. Ukuba akukho talente, emva koko ungaya ngenye indlela kwaye uzobe yonke into, inkqubo iya kwenziwa lula ngakumbi ngexesha lokuzoba. Njengoko uszoba, cima iileyile ezi rhabaxa (kwaye ngaphambi koko, uzisebenzise ngokhonkco olukhanyayo).
Nanku umzekelo wokuzoba Umzobo wentombazana:
Kuba umbuzo ucelwe ukuba uzobe hayi ubuso benkazana kuphela, kodwa ubuso obuhle, ndiza kunika ividiyo apho umzobi oyingcali upenda imizobo .. Nceda uqaphele ukuba umzobo wenziwe ngepensile yamalahle, ngendlela, idityaniswa ngokugqibeleleyo kwaye ayinakubekwa endaweni yomfanekiso. Kodwa lo msebenzi ukwasasazeka ngokukhawuleza, ewe, nawo, kufuneka ulungiswe.
Masizame ukuzoba ubuso bamantombazana ngepensile ngokwamanqanaba.
Kodwa ntoni ukuba sitsale intombazana ngamehlo akhe avale?
Ayimbi! Kwaye ngokungaqhelekanga :)
Ukuzoba ubuso wentombazana kunye nepensile kwizigaba ezinamehlo avulekileyo (kwaye intle kakhulu), le nkqubo ye-DETAILED iyakunceda. Ikwinqanaba ngokwamanqanaba kwaye kwiinkcukacha ezinkulu ibonisa indlela yokuhombisa kakuhle ubuso benkazana yam kunye neepensile ezinemibala:
Umhle ngokumangalisayo! Ndikunqwenelela impumelelo!
Ukuze ufunde indlela yokudweba ubuso obuhle babasetyhini, thatha ifoto yomlingisi owaziwayo waseMelika uMegan Fox:
Kuqala, chaza ubuso be-contour:
Faka isicelo kwiliso lomgaqo
Yenza ukuqubuda kobuso:
Kwinqanaba lokuqala, siya kuzoba i-oval yangaphakathi yobuso, intamo enamagxa ukuze intloko yethu ingabonakali yodwa, kwaye isakhe isentloko ngentloko elula. Sibonisa imeko yamehlo, impumlo kunye nemilebe ebusweni.
Ndihlala ndikwinqanaba lesibini elithi ;; ebusweni amachaphaza kwiindawo zemithunzi ebanjiweyo.
Sihlanganisa umfanekiso ngamehlo abonakalayo. Sifaka imibala emilebeni kunye namachaphaza kwaye senze iinwele ezithe tye ngemivimbo. Ubuso benkazana lilungile.
Kunzima kakhulu ukuzoba ubuso obuhle, obuqhelekileyo nobunobuntu bomntu, kodwa kunokwenzeka ngaphandle koqeqesho olukhethekileyo, kufuneka ube nomonde, uziqhelanise rhoqo, uzame iindlela ezahlukeneyo, ufumane iipensile kunye nephepha elilungileyo. Ndiza kuthumela imiyalelo yamanyathelo nenyathelo kwimifanekiso, enokuokuba luncedo kuwe.
Okuhle, ubuso benkazana bunokufundwa ukuzoba ngexesha elifutshane kakhulu. Ewe kunjalo, kuya kuthatha ixesha elide ukufezekisa izinto ezifanayo, kodwa kunokuba yinto entle kwangoko.
Uzamile & quot; sketchquot ;?
Okokuqala, musa ukungxama ukuya ngqo kubomi okanye kwifoto, zoba mhle ngoku & quot; ikhathuni yekhathuni; Itekhnoloji. Inyani yile yokuba kwiikhathuni ezitsaliweyo kunye nakumahlaya, njengomthetho, umgca ocacileyo ucacisiwe (njengombala wabantwana) kwaye kulula ukuphinda. Beka ikhathuni emhlophe qhwa okanye ibala elincinci kwaye uhambe. Owona msebenzi uphambili kuwe nakwisandla sakho ukukhumbula ukuba zeziphi iindawo zobuso indawo abakuyo kunye nobungakanani obuhambelana nomnye. Ndabona imizobo entle yamantombazana kwiphepha leetishu kwii-albhamu zedigilisation ezenziwe kusetyenziswa le ndlela. Ngethamsanqa)
Zoba ubuso benkazana kwimbono yam inzima ngakumbi kunobuso bendoda. Iimpawu zobuso kufuneka zithambe, zibukeke ngakumbi. Ngokubanzi, ndibukele le nkqubo malunga nokuba kutheni sibona into entle nento embi. Ithi phantse bonke ubuso basetyhini buba buhle ngakumbi ngenxa yeempawu zobuntwana.) Impumlo egudileyo, imilebe yomlomo oqaqambileyo, ubuso obuthambileyo obunqamlezileyo, isangqa esithe tyaba, isihlalo esinqeni esisihla ngezantsi. Kwindoda, ngokuchaseneyo, iimpawu zabantwana zenza ubuso bungabonakali buhle kubasetyhini-imbonakalo yabo yobuso imile, i-chin (umhlathi ongezantsi) ibanzi.
Ukuzoba ubuso bomfazi, kungcono ukuqala ukuzoba iinkcukacha ukusuka kwimivumbo yokuqala. Amehlo amabhinqa asetyhini adla ngokuba mncinanana, ahlala ethe kratya ngenxa yokucekelwa. I-oval yobuso ithambile ngokwaneleyo, kodwa ungongeza ukhuphelo lweencamathelisi ngokuthinta ukukhanya ukunika ubuso bomlinganiswa kwasekuqaleni. Njengoko ndibhalile apha ngasentla, umhlathi kubafazi uhlala ungaphantsi kwaye unesimo esithe xaxa. Imilebe ichaza kakuhle, umlomo omncinci. Ezitempileni, chaza iinwele, isitayile, i-hairstyle, ngeempawu eziqhelekileyo. Iindlebe zamantombazana zikhangeleka ngakumbi ukuba azikho kakhulu, ngelixa endodeni ayichaphazeli imbonakalo kakhulu. Ukongeza, amantombazana atyekele ekuhombiseni iindlebe zawo nge-serge, iziqeshana, njl. kwaye zisabonakala kakhulu.
Ke masizame Zoba ubuso basetyhini kwiprofayili, ebusweni obugcweleyo kunye nesiqingatha sokujika. Ukutshintsha kweempawu zobuso, kunye nendlela itshineli yokujonga itshintsha ngayo. Izithunzi, umlinganiselo wamalungu obuso, ukubukeka kwamehlo, njl. Njlnjl.
Ebusweni bepeyintiwe ubuso obugcwele, ilanga linokulingana-amehlo ngakubume obufanayo kunye nobukhulu, umlomo nawo ulingano. In ubuso behafu imikhwa eshukumayo, iliso elithe qelele liba likhulu ngokubonakalayo lincinci, quot; ngokuthe tye. Nceda uqaphele ukuba umgca wempumlo ufundwa ngokupheleleyo, ukudityaniswa kunye neliso lamehlo lendawo ekude yobuso, i-chin quot; ihambisa ngaphezulu; i-oval yobuso eguqukele kwicala, enye ye-cheekbone ngoku ime ngokungaphezulu (kwicala apho ubuso bujikile).
Ubuso beprofayili, ngokwahlukeneyo, iinguqu nangakumbi. Sinehlo elinye nje elibonileyo lasekhohlo, ngoku siyakwazi ukubona ubume kunye nobude be-chin neempumlo, kwaye ukwakheka nobungakanani bendlebe sele zimiselwe ngokuthe ngqo (ngoku kufuneka siyidwebe ngokucacileyo, ngokweenkcukacha). Qaphela, xa ujika intloko, loo malungu obuso ayabonakala, iintloko ezazicaciswe kuhlobo lwangaphambili kuphela zidwetshiwe. Xa intloko ijika, la malungu entloko ngoku ephambili kufuneka ngokuchanekileyo atsalwe ngakumbi, ngokucacileyo.
Nika ingqalelo indlela ubungakanani kunye nokuma kwentamo kutshintsha ngokujikeleza kwentloko. Ngaphambili, intamo yeyona intle ngokuthe ngqo, ububanzi bayo abubandisi ngaphaya kwemiphetho yamehlo - obu bukhulu bubukhulu obujongeka buthandeka. Xa ujika kwikota ezintathu zomhlathi usiya kwicala kwaye sibona ukugoba emqaleni, ojikelezwe endlebeni. Sitsala iinwele kwiprofayili ukuqala kumgca apho intamo kunye nentamo zidibana khona. Isitayile, ubude kunye nesitayile seenwele zinokwahluka kakhulu. Ukuba kunokwenzeka, chaza inani leenwele, ubude, imilo, njl, ngaphambi kwexesha, ukuze kamva ungabi nakulungisa kakhulu, kuhlambe. Khumbula ukuba kuxhomekeke kutyekelo okanye ukujikeleza kwentloko, iinwele ngamanye amaxesha ziyafihla, emva koko zivule imbeko yobuso.
Ngoku ihlala yongeza iinkcukacha kwiinwele, zoba imitya ethile kunye neenwele. Ukuze unike iinwele emfanekisweni ngakumbi ngakumbi; i-volumetric quote;, iinxalenye zeenwele zitsalelwa ngokucacileyo, ezinye zenziwa zakhaphukhaphu, ezinye zimnyama kakhulu-ukulingwa, zama ... jonga imifanekiso embalwa ubone ukuba kutheni iinwele ezikwifoto zijongeka njengezendalo ngakumbi, zifumana ivolumu engakumbi . Umntu othile uthanda ukuzoba imitya esuka ezingcanjini, umntu uthatha isigqibo sokuzivalela kwimigca emifutshane yomntu ngamnye, kwaye umntu ngokubanzi nje uthi; kunye nemithunzi. Okuninzi kuxhomekeke ekubeni kamva uya kuyinika na umzobo wakho wokubala umbala wepensile, umbala.
Ngasizathu sithile ndinobuso obucaphula; Eyona ndlela ilula yokuzoba ubuso bokwenyani ukusuka kwindalo (ebinzima ngakumbi) okanye ukusuka kwifoto (ekulula kakhulu). Yibambe, ngokungathi kunjalo.
Okokuqala, unokuchaza nje ubume bobuso.
Emva koko chaza amehlo, impumlo, imilebe.
Amehlo kufuneka anikwe ingqwalaselo enkulu, wona; ubuso.
Ukuphela komfanekiso kulula.
Ewe kunjalo, kuya kufuneka usebenze nzima, kodwa obu buteknoloji bunyulu.
Ndikucebisa ukuba uzobe olu khetho, kuba kulula ukwenza, kwaye isiphumo simangalisa. Siqala ngoku:
Yongeza okulandelayo kumfanekiso:
Nantsi inqanaba lokugqibela:
Ukuzoba ubuso obuhle, kuya kufuneka unetalente encinci kunye nokusebenza nzima, kwaye usafunda kwisikolo sobugcisa.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,379.